ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မိမိတို့မြန်မာပြည် အပိုင်း(၂) - Yangon Nation News
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မိမိတို့မြန်မာပြည် အပိုင်း(၂)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် Nikkei Asia Revie
ထားဝယ်စီမံကိန်း ၊ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အမေးကို မြန်မာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဖြေကြားပြောဆိုမူ –
အမေး – – မြန်မာ၊ ဂျပန်၊ ထိုင်း နိုင်ငံတွေက ထားဝယ် စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတော်ကြာ ကြာကတည်းကပြောနေ ဆိုနေကြတာ တွေ ရှိတော့ ဒီပရိုဂျက်နဲ့
ပတ်သက်ပြီး တိုးတက်မူရှိတယ်လို့ မြင်ပါသလား ?
အဖြေ – – ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မတို့က မြန်မြန် သွက်သွက်ဖြစ်ခြင်တာပေါ့၊
ဒါပေမယ့် ကျွန်မ စောစောကပြောခဲ့သလို
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာက အာဏာရှင်စနစ်ထက် စာရင်တော့ နဲနဲ ပိုပြီးနှေးတယ်လေ၊ ဒါကလည်းကဏ္ဍအသီးသီးကို ညှိနှိုင်းပြီး တိုင်တိုင် ပင်ပင် လုပ်ရလို့ပါဘဲ၊
ရှင်သိတဲ့အတိုင်း ကျွန်မတို့က ဖက်ဒရယ်စနစ် အပြည့်အဝ မရှိသေးပေမယ့် ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်၊
ထားဝယ်က တနသာင်္ရီ ဒေသကြီးထဲမှာ ရှိတယ် ဆိုတော့ အဲဒီ ဒေသကြီး အစိုးရက စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်နေတာတွေကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားခဲ့ရတယ်၊
ပြီးတော့ ဗဟိုအစိုးရ ရဲ့ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေ၊
ပြီးရင် ဒီနှစ်ခုကနေတင်ပြတာတွေက ရင်းနှီးမြု ပ်နှံမယ့် လူတွေရဲ့ လိုအပ်ချ က်တွေနဲ့ တစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေဘို့လိုတယ်။
အမေး – – ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိုဆက်ကြရအောင်ပါ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်အတွင်း အခြေအနေကို ဖြေရှင်းဖို့ပျက်ကွက် တယ်ဆိုပြီး အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ဝေဖန်ပြစ်တင်ခံခဲ့ရပါတယ်၊
မူဆလင်တွေ နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေတာတွေကို မဖြေရှင်းနိုင်သေးဘဲ မဆိုစလောက်လေးပဲ ပြန်လာတာဘဲ ရှိနေပါတယ်၊
ဒီပြသာနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲ ?
အဖြေ – – ကျွန်မတို့ ကြိုးစားနေပါတယ်၊
ရှည်ကြာနေတဲ့ ပြသာနာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ရိပ်စားမိပါတယ်၊
၂၀၁၆ မတ်လ အကုန် ကျွန်မတို့အစိုးရစတင် တာဝန်ယူလာခဲ့ပါတယ်၊
မေလ အကုန်မှာပဲ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြို းရေး ဗဟိုကော်မရှင် တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်၊
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဥပဒေစိုးမိုးမူ မရှိ ဖွံ့ ဖြို းမူလည်း မရှိဖြစ်နေတာက စပြီး ရေရှည်ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ ပြသာနာတွေဆိုတာကျွန်မတို့ သိထားလို့ပါဘဲ၊
အချို့လူတွေ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဘို့ ကြိုးစားနေသလို ဘာသာရေးပြသာနာ မဟုတ်ပါဘူး၊
စီးပွားရေးနဲ့လူမူရေး ပြသာနာတွေ ထဲထဲ ဝင်ဝင် ပါနေပါတယ်၊
စီးပွားရေး ကြပ်တည်းလာတာနဲ့အမျှ၊စီးပွားရေး ၊လူမူရေးပြသာနာတွေ ပိုဖြစ်လာရတာပါဘဲ။
ရခိုင်က ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ အဆင်းရဲဆုံးနဲ့ ဖွံ့ ဖြို းမူ အနည်းဆုံး ပြည်နယ်တွေထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်၊
ဒါပေမယ့် အရမ်းကောင်းတဲ့ အလား အလာတွေ တစ်ပုံတစ်ခေါင်းကြီးရှိနေပါတယ်၊
သင့်တင့်လျောက်ပါတ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ မလုပ်ခဲ့ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီအတွက်လည်း ကျွန်မတို့ ၂၀၁၆ မေလမှာ ကော်မရှင်ဖွဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊
ကိုဖီအာနန် ကိုချည်းကပ်ခဲ့ ပါတယ်၊ ရခိုင် ပြည်နယ်ထဲက လူမူရေး ပြသာနာတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ကျွန်မတို့ကို ကူညီတဲ့ အနေနဲ့ ကော်မရှင်တစ်ခုဖွဲ့ပေးဘို့ပါဘဲ၊
အဲဒါတွေ စီစဉ်နေတာ ပြီးလု ပြီးဆဲမှာပဲ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မူတွေ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ်၊
ဒီတော့ ကျွန်မတို့ဘယ်လိုထင်လာသလဲဆိုတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး မလိုခြင်တဲ့ အင်အားစုတွေ၊
ရခိုင်ပြည်နယ်က ပြသာနာတွေအတွက် အဖြေ မရှာခြင်တဲ့ လူတွေ ရှိနေပြီ ဆိုတာပါဘဲ၊
ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ ဒီပြသာနာတွေ ရှိနေမှလည်း အကြမ်းဖက်သမားတွေ အင်အားကြီးလာကြမှာကိုး။
ပြီးတော့ ဖွံ့ဖြိုးမူနဲ့ တည်ငြိမ်ဘို့ရှိလာမယ်၊ ခြားနားနေတဲ့ လူမူအသိုက်အဝန်းနှစ်ခုအကြား နားလည်မူတွေ ရသွားမယ်ဆိုရင်အကြမ်းဖက်ဝါဒ အတွက်နေရာ မရှိတော့ မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်၊
ကျွန်မတို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ ပြသာနာတွေမှာ အကြမ်းဖက် ဝိသေသတွေ ကပ်ပါ လာနေတာကို နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝိုင်းကအရေး တယူ မရှိခဲ့တာကိုအတော်လေးစိတ်ပျက်မိပါတယ်၊
လူ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီး သူတို့စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်တာတွေကိုလည်း ကျွန်မတို့နားလည်ပါတယ်၊
နိုင်ငံမဲ့ ဆိုတာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ပြောရရင် နိုင်ငံသားဖြစ်မူဥပဒေတွေကို ကျွန်မတို့ ပိုပြီး နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ကြည့်တတ်ဘို့လိုပါတယ်၊ ဘယ်လို အခွင့် အရေးတွေ ပေးထားတယ်၊ ဒါတွေကရခိုင်ပြည်နယ်က လူတွေတင်မကပါဘူး၊တစ်နိုင်ငံလုံးကလူတွေအတွက်ပါ ပါပါတယ်။
နိုင်ငံသား စီစစ်ရေးကပ်က ရခိုင်ပြည်နယ်က လူတွေကို ပြစ်မှတ် ထားပြီး လုပ်တယ်လို့ ပြောနေကြတာ ရှိပါတယ်၊
အဲ့ဒါလုံးဝ မမှန်ပါဘူး၊ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်၊
ကျွန်မတို့အားလုံးလည်း ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း သွားရပါမယ်၊
မြန်မာမိဘနှစ်ပါးကမွေးတဲ့ လူတောင် ဒီအတိုင်းပဲသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းသွားရမှာပါ၊
အသက် ၁၂ နှစ် ရောက်တဲ့အခါ တစ်ကြိမ်၊အသက် ၁၈နှစ်ရောက်တဲ့အခါတစ်ကြမ်နဲ့ အသက် ၃၀ ရောက်တဲ့အခါ တစ်ကြိမ် စီစစ် ရပါတယ်၊ ဒါက တစ်နိုင်ငံလုံးလုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်၊
အခြေအနေကို နားမလည်တဲ့ လူတွေကတော့ သူတို့ စိတ်ဝင်စားတာကိုပဲ အာရုံစိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်၊
ကျွန်မတို့အဖို့ကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးကို စိတ်ဝင်စားမှ ဖြစ်မှာပါ၊
ရခိုင်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြသာနာတွေ စိမ်ခေါ် မူတွေထဲက တစ်ခုပဲ ရှိပါသေးတယ်၊
ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရဲ့ စိမ်ခေါ် မူတွေ အားလုံး မဟုတ်သေးပါဘူး။
အမေး – – ခင်ဗျားရဲ့အနေအထားကို ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်၊
ဒါပေမယ့် အမေရိကန်၊အီးယူတို့နဲ့ စီးပွားရေး ဆက်ဆံမူတွေ တိုးချဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
ဒီပြသာနာကို ဖြေရှင်းဘို့ လိုကောင်းလိုလာပါလိမ့်မယ်။
အဖြေ – – ကျွန်မတို့ ဖြေရှင်းချင်ပါတယ်၊ ဒါကလည်း အခြားနိုင်ငံ တွေနဲ့ စီးပွားရေး ဆက်ဆံမူတွေတိုးချဲ့ချင်တဲ့ စိတ်မျိုးနဲ့တော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံအတွက် ငြိမ်းချ မ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေး အတွက် မရှိမဖြစ်
ဒါကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ပြသာနာဖြေရှင်းလိုတဲ့အဓိက အကြောင်းပါဘဲ၊
ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ နိုင်ငံရဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်မူကို အာမခံစေမယ့် ရေရှည်တည်တံ့ သွားစေမယ့် နည်းမျိုးနဲ့ပဲ ကျွန်မတို့ဖြေရှင်းချင်ပါတယ်၊
ဒီထဲမှာ ကွဲပြားနေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေလည်း ရှိနေမှာပါဘဲ၊
ဒါပေမယ့် အားလုံးက ဆက်စပ်နေပါတယ်၊
ကျွန်မတို့ အတူတူ ဖွံ့ဖြို းအောင် လုပ်ပြီး ရှေ့ဆက် သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်များကား ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံအရ
ဦးဆောင်နေသော ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများသို့အသိပေး ဖြေကြား ပြောဆိုမူများပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြောဆိုမူများကို မိမိတို့နိုင်ငံသားအားလုံးမှ စိတ်ပါ လက်ပါ ဖတ်စေခြင်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိမိတို့နိုင်ငံနှင့် မိမိတို့ နိုင်ငံသားများအတွက် အခက်အခဲများစွာကို ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းနေရသည်ကို မိမိတို့ ပြည်သူ ပြည်သားများမှ ကိုယ်ခြင်းစာ နားလည်ပေးကာ စည်းစည်း လုံးလုံးဖြင့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့အတူ မိမိတို့နိုင်ငံ့ အရေးကိစ္စများကို ပြေလည်စေရန်ညီညွတ်သောအင်အားများနှင့်ပေါင်းစုကြရပါမယ်၊
စာရေးသူ၏ တွေးဆချက်တစ်ခုကိုလည်း တဆက်တည်းရေးသားတင်ပြပါရစေခင်ဗျာ၊
မိမိတို့၏ ညီရင်းအကို မောင်နှမများဖြစ်ကြပါသော ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသ အသီးသီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကျေးလက်တောရွာများ၌မွေးဖွားကြီးပြင်းနေထိုင်နေလာကြသော ဒေသအတွင်း အောက်ခြေ ကျေးလက်ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်များ၊မှီတင်း နေထိုင်ကြသော ရခိုင်ပြည်သူတစ်ဦးခြင်း၏ လူမူဘဝများအပြင် အသက်ရှင်နေထိုင်မူများသည် လုံးဝ မလုံ ခြုံတော့ပေ၊ လုံခြုံမူက မရှိတော့ပါ။အသက်အိုးအိမ်ကိုလည်း အာမခံနိုင်ခြင်းများလည်းအလွန်ပင် နည်းပါးလာပါတယ်။
သို့ပါသောကြောင့် အထူးသဖြစ် မြို့ကြီး ပြကြီးများ၊ရန်ကုန်မြို့နှင့် ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီး၌နေထိုင်ကြပါသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအပါအဝင် လူထု လူတန်းစားအသီးသီးမှ အဝေး၌ အန္တရာယ် ကင်းကင်းနေထိုင် စားသောက်ကြရသော်လည်းဘဲ၊
တစ်နေ့စာ တစ်နေ့ မနည်းရှာဖွေ စားသောက်နေထိုင်နေကြရတဲ့ ကိုယ့်ဇာတိ ရွာများမှ လွဲ၍ အခြားသွားစရာမရှိကြသော၊အခြားနေရာ ဒေသများတွင် ရှာဖွေ မစားသောက်တတ်သော ကျေးလက်နေ ရခိုင်လူထုအား ငဲ့ညှာကြစေခြင်ပါတယ်။
ကိုယ်ကတော့ အန္တရာယ်ကင်းစွာ စည်းစိမ်အပြည့်ဖြင့်အဝေးမှာနေကြပြီး ဒေသအတွင်း ကျေးလက်နေရခိုင်ပြည်သူများအား မြှောက်ပင့် သွေးထိုးနေကြခြင်းကို သက်ဆိုင်သူ အားလုံးမှ ရှောင်ကျဉ် ကြစေခြင်ပါတယ်၊
ဆင်းရဲ ဒုက္ခနှင့် အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရေးကို စားစရာချို့တဲ့မူများ၊ဟိုအလှူ ရှင်ဆီက ရနိူးနိူး ဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံမှ ရနိူးနိူး ကိုယ့်ရွာ ကိုယ့် အိမ်မှာလည်းနေလို့မရဖြင့် စစ်ရှောင် ဒေသများတွင် ချို့ချို့တဲ့တဲ့ ဖြင့်နေထိုင်စားသောက်နေကြရပါတယ်။
မိမိဒေသ၊မိမိဇာတိ၊မိမိနိုင်ငံ၊မိမိဒေသသား၊မိမိနိုင်ငံသားအားလုံးကို ချစ်ခင် ကြင်နာ
ကိုယ်ချင်းစာ ငဲ့ညှာကြခြင်းသည် မိမိတို့ အားလုံး၏ တာဝန်ယူမူကျင့်ဝတ် နှင့် တာဝန်များပင်မဟုတ်ပါလား ?
လက်ရှိ တည်ဆဲအစိုးရနှင့် တပ်မတော်အပါအဝင် AA မှာကော တာဝန်မရှိပေဘူးလား ?
AA သည် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများထားရှိရမည့် ကျင့်ဝတ်ကို ဂရုတစ်စိုက်မရှိပါဘဲ အရပ်သား ပြည်သူများအပေါ်မှာ အကြမ်းဖက် အသွင်ဆောင်နေတာကိုလည်း တွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။
ယခု Covid ကူးဆက်မူကာလတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံရေးဆက်နွယ်နေသည့် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမူများရှိနေသော်လည်း အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်က အာဆီယံစျေးကွက်သို့ Covid -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးဖြန့်ချီရန်အတွက် အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ် ထိုင်းနိုင်ငံကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီးထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဖြစ်သည့် အနူတင်ချန်ဗီယာကူလ်နှင့် အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်တို့သည်
Covid -19 ရောဂါဆိုင်ရာသုတေသနကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း၊ခွဲဝေခြင်းဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်၊
Siam Bioscience Co…Ltd ပိုင်စက်ရုံကိုအသုံး ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်၊
ယခုအခါမှာ သုတေသနနှင့်တီထွင်မူကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါပြီဟု သတင်းများမှာတွေ့နေရပါတယ်၊
Siam Bioscience သည်ထိုင်းနိုင်သားပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်၊
ဆိုလိုချင်တာက မိမိတို့၏ အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံသည် လက်ရှိနိုင်ငံရေးပြသနာများရှိနေပေမယ့် နိုင်ငံရဲ့ Institution အခြေခိုင်မူရှိပြီး၊သူတို့နိုင်ငံရဲ့ အရပ်ရပ်သော ရင်းနှီးမြုတ်နှံမူစီးပွားရေးများကို နိုင်ငံသားများအပါအဝင် အရပ်ရပ်သောအဖွဲ့စည်းများက ဖျက်လို ဖျက်စီးမူများမလုပ်ကြသော၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက်တာဝန်ယူမူ စိတ်ဓာတ်တည်ဆောက်ထားမူများကို သိကြစေချင်မူဖြစ်ပါတယ်၊
မိမိတို့နိုင်ငံသည်လည်း ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးများ ဖြစ်တည်လာစေဖို့မိမိတို့အားလုံးရုန်းကန် ကြိုးစားကြရအုံးမှာဖြစ်ပါတယ်၊
အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မူသည် တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်သည့် အစိုးရအပေါ်၌ သာမူတည်ပါလိမ့်မယ်၊
လက်ရှိအချိန်ရွေးကောက်ပွဲမှ နှစ်ခုမှ တက်လာသော ၏အစိုးရနှစ်ရပ်မှ ခေါင်းဆောင်တို့၏ ပါတီနဲ့ နောက်ခံသမိုင်း လုပ်ရပ်ကိုယှဉ်ပြီး စဉ်းစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်၊
(၂၀၁၀) ရွေးကောက်ပွဲမှတက်လာသော အစိုးရသည် တိုင်းပြည်၏ အရေးကြီးသည်ံအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၊
တပ်မတော်မှာလာသော အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်ကာ အနယ်နယ်သော ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များ၏ ဆန့်ကျင်ပြောဆိုမူ၊ မခံရပေမယ်လို့ မိမိတို့နိုင်ငံကို ခန်းနားသော ဖြစ်စဉ်များကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါလား၊
(၂၀၁၅)အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှတက်လာသော ယနေ့အစိုးရ၏ လုပ်ဆောင်မူတိုင်း၌
အပြောအဆို၊အရေးသားများတွင် အစိုးရနှစ်ရပ်ရှိနေသည့်အသွင်ဆောင်နေမူများကို ရင်ဆိုင်နေရပေမယ်လို့ယနေ့ မိမိတို့နိုင်ငံတွင်ဥပဒေပြဌာန်းမူများနှင့်အညီအစိုးရဖြစ်လာပြီး၊
ယနေ့အစိုးရအဖွဲ့အား တာဝန်ယူ၊တာဝန်ခံလျက်ပြောဆို ဆောင်ရွက်နေသော
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိမိတိုင်းပြည်နှင့်မိမိနိုင်ငံသားများအတွက် ကိုယ်စားပြုရပ်တည်မူဖြင့် တစ်ဖက်သတ်ဆန်ဆန် ပြုမူပြောဆိုနေကြသော နိုင်ငံများအား တန်းတူ ရည်တူ ပြောရေးဆို့မူများဖြင့်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တာမဟုတ်ပါလား၊
သို့ပါသော အကြောင်းအချက် အခြေအနေများကို ထောက်ချင့်ခြင်းဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံသည် အသီးသီးသော တိုင်းသူပြည်သားတို့၏တာဝန်ယူမူ ကိုယ်စီဖြင့် နိုင်ငံကို တည်ဆောက်ထူထောင်ကြရအုံးမှာမဟုတ်ပါလား၊
ဤကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နိုင်မူ၊စိတ်ဓာတ်တည်ကြည်ခိုင်မြဲမူသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ တစ်ပါး ယနေ့ကာလမှာ မရှိနိုင်သေးပေ၊
ယနေ့မိမိတို့တိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်နေဆဲ၊နှင့် လိုအပ်နေမူသည်
အစိုးဖွဲ့နိုင်သော အင်အားအပြည့်အဝရှိသည့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်များအားထောက်ခံအနိုင်မဲများပေးခြင်းသည်လည်း တိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်နေဆဲသာဖြစ်နေပြီး၊
ပြည်ထောင်စုအစိုးအဖွဲ့နှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၌ အဖွဲ့ဝင်များတွင်အနိုင်ရ တိုင်းရင်းသားပါတီမှကိုယ်စားပြုသူများကို ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ဘို့သည် မိမိတို့ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက် အရေးပါလိုအပ်ပါပေသည်။
နိုင်ငံရေးစနစ်နှင့် မူဝါဒ သည်လည်း ခိုင်ခန့်မူရှိဘို့သည်လည်းလိုအပ်ပါတယ်။
သို့ပါသော အကြောင်းအချက်များကို ထောက်ရှု ချင့်ချိန် သုံးသပ်ကြရင်း –
မိမိတို့ နိုင်ငံအတွက် အောင်လံ စိုက်ထူနိုင်ဖို့ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသားပြည်သူ ပြည်သားအားလုံးက အနိုင်ထောက်ခံမဲများပေးကြပါစေရင်းဖြင့် –
စာရေးသူသည် နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားပြည်သူ
တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို ချစ်ကြည်မူများဖြင့် ရေးသား နှိုးဆော် တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အလေးထားစွာဖြင့်.ကိုသိန်းဌေး ၈၈ ပဲခူး၊
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အမေရိကန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးငွေကြေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားတွေ့ဆုံ
မိမိ ဆန္ဒပြုထားသော ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ ပယ်မဲ မဖြစ်စေရေး သေချာစွာ စိစစ်ဆောင်ရွက်သွားရန် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် တိုက်တွန်း